Omar Sayid Abdilahi: 2015
Jawaabtii Xildhibaan Dheeg
Maanta waxaan u jawaabay xildhibaan Maxamed Maxamuud Yaasiin oo ku magac dheer d DHEEG.
Wuxuu wasaarada iyo guud ahaanba dawlada ku eedeeyay musuq maasuq iyo isaga oo duray saamiga shaqaalaha madaarka ee degaanka koonfurta Hargeisa.
Xildhibaanku umuu hadlayn danta guud sida uu sheegtay ee waxa ka hadlinayay dano shakhsiya oo uu waayay .
Posted by Omar Sayid Abdilahi at 5:03 AM No comments:
Safarkii ADDIS ababa iyo la kulankii Ethiopian airlines iyo Ardaydii wasaarada
11 bisha August 2015 maalintuna ahayd salaasa ayaanu ka duulnay madaarka caasimada ee EGAL international airport aniga iyo wasiir ku xigeenka wasaaarada Mr Saeed Abdi Gaagaale.
Ujeedayadu waxay ahayd marti qaad rasmi ah oo aanu ka helnay shirkada Ethiopian Airlines ka dib saddex sano oo duulimaad joogto ah ay ka waday somaliland.
Waxaanu ka wada hadalnay labadayada dhinac sidii xidhiidhkaas saddex jirsaday loo sii xoojin lahaa maadaama labada dal ay yihini laba dal oo jaar ah dano badana ka dhaxeeyaan.
Waxa na qaabilay madaxa marketinka ethiopian airlines Mr busera iyo labada sarkaal ee kala haysta bariga iyo badhtamaha afrika Hyla Melekot iyo Mr Redi Yusuf.
Wuxu ahaa dhinaca kale kulan adag oo gorgortan ku bilaabmay iyada oo qolo waliga soo bandhigaysay sida ay qolada kale ugu listay .
Kulankaas ka dib waxaanu qado sharaf ku maamuusnay dafcadii ugu horeaysay ee wasaarada duulistu soo dirto oo ku baranaya ethiopia cilmiga Air traffic controllka ama sida awada loo maamulo.
waa arday ka kooban 15 arday oo wasaaradu dirtay si fiicana loo soo xulay.
Aad iyo aad ayan ugaga mahad naqnay uguna bogaadinay guulaha ay ka gaadheen waxbarashada iyo amaanta ay dalkoodii u soo hooyeen.
Qadadii ka dib waxaanu isu raacnay machadka tababarka anaga la kulanay macalamiintdoodii oo runtii aad iyo aad noogu bogaadiyay sidaanu ardaydan u soo xulnay.
wuxuu ahaa safar kooban oo isla maaalintii ku xigtay ee arbacadii 12 bisha August aanu soo noqonay laakiin wuxuu ahaa safar faaiido badan oo midho dhalay.
Posted by Omar Sayid Abdilahi at 4:59 AM No comments:
Posted by Omar Sayid Abdilahi at 5:09 AM No comments:
Dhagax dhigii Madaarka Laascaanood ( Gole yeedhay )
Maanta waxaanu dhagax dhignay Madaarka degmada Laascaanood ee Gole yeedhay loo yaqaan.
Waxa safarka igu wehelinayay wasiirka hawlaha guud, gaadiidka iyo guryaynta Cabdirisaq khaliif Ahmed .
Waxa kale oo aanu garoonka ku soo sameeyay assesment ku saabsan waxyaabaha uu u baahan yahay ee aasaasiga ah sida gaadhi dab damis ah, laba xafiis iyo siligii garoonka .
Waxa nagala soo qayb galay madaxdii gobolka haday tahay madaxdii dawlada, madaxdii dhaqanka iyo ganacsatadii gobolka iyo dadwayne kale oo fara badan.
Dad waynaha gobolka sool waxaan ka dareemay inay hada uun si fiican u fahmeen macnaha dawladnimada iyo horumarka doonayaana inay la jaan qaadaan gobolada kale ee dalka.
Waxa qariib igu ahaa markii saddex gaadhi oo gaashaaman ay nagaga hor yimaadeen degmada OOG taas oo aan waxoogaa ka yara naxay.
Habeenimadii xalay waxaan ku tukuday salaadii cishe iyo taraawiixdii masjid Jaamaca magaalada aniga oo aan wadan wax staff ah.
Way adag tahay in ruux masuul ka ah Somaliland uu magaalada Laascaanood dhex maro isaga oo aan wadan staff, laakin anigu waan ku dhiiraday waayo cid badan oo i garanaysaa may jirin mida kale waxaan aaminsahay inaan wixii qadar ah cidina baajin karin.
Posted by Omar Sayid Abdilahi at 9:35 AM No comments:
Posted by Omar Sayid Abdilahi at 4:34 AM No comments:
Safarkii ADDIS ababa iyo la kulankii Ethiopian air...